i-UV fluorescent pigment yokuphrinta okulwa nokukhohlisa
Umbala we-UV fluorescentuqobo lwayo alunambala, futhi ngemuva kokumunca amandla elambu le-ultraviolet (i-uv-365nm noma i-uv-254nm), likhipha ngokushesha amandla futhi likhombisa umphumela ocacile wombala we-fluorescent. Lapho umthombo wokukhanya ususwa, uyema ngokushesha bese ubuyela esimweni sokuqala esingabonakali.
Idayi ebomvu ebomvu ungudayi we-High Performing Fluorescent wokufaka umbala kuplastiki, unokuqina kwesimo sezulu okuhle kakhulu ,, Ukuqina okuphezulu kokushisa, I-chroma ephakeme kakhulu!
Umbala we-UV fluorescent uqoboayinambala, futhi ngemuva kokumunca amandla elambu le-ultraviolet (i-uv-365nm noma i-uv-254nm), ikhipha amandla ngokushesha futhi ibonise umphumela ocacile wombala we-fluorescent. Lapho umthombo wokukhanya ususwa, uyema ngokushesha bese ubuyela esimweni sokuqala esingabonakali.
Izingulube ze-Themochromicakhiwa ama-micro-capsules aguqula umbala ubuyele emuva. Lapho izinga lokushisa likhuphukela ezingeni lokushisa elicacisiwe i-pigment isuka kombala iye kumbala (noma isuka komunye umbala iye komunye umbala). Umbala ubuyela kumbala wokuqala njengoba i-pigment sehlile.